I-SPL yasekwa ngo-2001 kwaye iyinkampani ephethwe ngokupheleleyo yiLianhe Chemical Technology Co, Ltd. (Yabelana ngekhowudi 002250). I-SPL ibekwe epaki yomzi mveliso weBaoshan eShanghai, inonxibelelwano oluhle kakhulu kunye nenkqubo yezothutho efanelekileyo, kufutshane nommelwane kunye nendlela engaphandle yesanghai, kunye ne-13km kude nesikhululo seenqwelomoya saseHongqiao, kunye ne-12km kude neSitishi sikaloliwe iShanghai. Umzi-mveliso we-SPL wakhiwe kwindawo eyi-27,000m2, ebandakanya indawo ephambili yokwakha eyi-18,000m2. Inkampani i-ISO 9001: 2015 iqinisekisiwe kwaye ilandela ngokungqongqo izikhokelo ezibekwe phantsi kwale nkqubo yolawulo loMgangatho.
Kwimizamo yokuhlangabezana neemfuno zakho, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.